Suurta Gal Ma Tahay In Xilka Laga Qaado Donald Trump - Awdinle Online
Suurta Gal Ma Tahay In Xilka Laga Qaado Donald Trump
November 10, 2019 (AO) – 13-ka bishan ayaa la filayaa in uu billowdo dhageysiga dacwadda la doonayo in si rasmi ah xil ka qaadis loogu sameeyo madaxweyne Trump.
Basle marka laga hadlayo xaaladda dhabta ah, ma ahan mid sahlan, suurtagalna ma aha in maalin kastaa aad aragto madaxweyne Mareykan ah oo halis ugu jira in aqalka Koongareesku uu xilka ka xayuubiyo.
Dalka Mareykanka waxaa ka socday dedaallo inta badan ay wadaan xubnaha xisbiga Dimuquraadiga oo lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo Donald Trump.
Xilka ka qaadistani ayaa ah nooc dacwad ah oo horseedi karaysa in aqalka Koongareeske ee Mareykanku uu xilka ka qaado madaxweyne xil hayo.
Dadka qaar ayaa u maleeyo in dacwaddaasi xil ka qaadista ahi ay ka dhigan tahay in isla markiiba Trump uu xilka sidaa ku waayayo balse xaqiiqada ayaa ah in ay tahay billowga hannaan laba qeybood ka kooban oo ay tahay in ay qaadaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi.
Xildhibaannada aqalka wakiillada ayaa eegaya caddeymaha ka dhanka ah madaxweynaha, ka dibna waxay go’aan ka gaarayaan in la sii wado dacwadda madaxweynaha ama ay markiiba soo jeediyaan in la marsiiyo sharciga xil ka qaadista.
Balse aqalka Sare ee baarlamaanka ayay tahay mas’uuliyaddiisu in uu dacwaddaasi qaado. Haddii wax dambi lagu helo madaxweynaha isla markiiba waxaa laga xayuubinayaa xilka waxaana madaxweyne loo magacaabayaa kuxigeenkiisa.
Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa in uu ku tagrifalay awooddiisa madaxweyne isla markaana uu adeegsaday siyaasad qaab daran oo uu ku xoojinayo sidii mar kale loo soo dooran lahaa sanadka dambe.
Previous articleFloods kill 25, injure 47 in Somalia: WHO
Next articleDiyaarad Sida Gergaar Oo Ku Sii Wajahan Baladweyn